Qolka bandhiga waxaa loo qaybin karaa labo ama seddex iyadoo kuxiran miisaanka carwada.
Waad abuuri kartaa boos kuu gaar ah adoo diyaarinaya nashaadyada bandhigyada nooca tareenka.Waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin kala duwan sida bandhigyo iyo muxaadarooyin.
Qaabka isu soo baxa
Maaddaama aysan ahayn qaabdhismeed aan cod lahayn, waxaa jira xayiraadyo kuxiran waxyaabaha isticmaalka.Fadlan hubi markaad tixgelinayso adeegsi aan ka ahayn bandhigyo, casharro, iyo aqoon isweydaarsiyo.Looma isticmaali karo cod weyn sida u garaacayo qalab muusiko ah ama karaoke. (Ku xadidan BGM ugu yar.)
Suurtagal ma ahan in gebi ahaanba loo beddelo qeexitaannada shirarka, muxaadarooyinka, iwm.
Meesha ay ku rakiban tahay guddiga bandhiga la dhaqaajin karo lama beddeli karo maalinta.
Sameecadaha sameecadaha sida makarafoonada looma isticmaali karo isticmaalka bandhig.
Sidoo kale waa suurtagal in la isku xiro hoolka yar iyo qolka bandhigga (isticmaalka isku dhafan). (Waa lagama maarmaan in la amaahdo isla qaybtaas isla maalintaas.)
Awood / qalab
2.3 baararka bandhigga (W3.1 x H46m)
200 oo sawir qaade
100 goobo bandhig iyo kuwa kale
* Haddii ay dhacdo kala qaybsanaanta isticmaalka, lambarku wuu is beddelayaa.
U isticmaal shirarka
Kaliya gudoomiye: 400 kursi
Miis iyo kursi: 200 kursi
Qalab qalab maqal ah (oo ay ku jiraan 3 mikrofoonno wireless ah) iyo kuwo kale
Kuwa isticmaala qolka carwada waxay u isticmaali karaan qolka diyaarinta lacag la’aan.
* Haddii qolka carwada la qaybsho, waxaa lala wadaagi doonaa kooxaha kale.
Ku saabsan qolka diyaarinta qolka bandhigga
Ku saabsan bakhaarka
* Waxaa loo isticmaali karaa oo keliya shirarka.
* Sababtoo ah waxaa lala wadaagayaa hoolka yar, fadlan horay usamee.
Mashiinka barafka, iwm
* Maaddaama lala wadaago qolka, laguma deyn karo meeshiisa ka dib marka la qaado ama la saaro.
[Qaabka bandhigga] Qolalka oo dhan waa la isticmaalaa
Bedka: qiyaastii 338 mitir murabac
Kordhinta guddiga bandhigga: Qiyaas ahaan 138m
[Qaabka bandhigga] laba loo qaybiyay
Qolka carwada A
Bedka: qiyaastii 166 mitir murabac
Kordhinta guddiga bandhigga: Qiyaas ahaan 69m
Qolka carwada B
Bedka: qiyaastii 171 mitir murabac
[Habka bandhig 3] U adeegso XNUMX qaybood
Qolka carwada 1
Bedka: qiyaastii 83 mitir murabac
Kordhinta guddiga bandhigga: Qiyaas ahaan 40m
Qolka carwada 2
Qiyaastii 166 mitir murabac
Kordhinta guddiga bandhigga: Qiyaas ahaan 62m
Qolka carwada 3
Qiyaastii 88 mitir murabac
[Qaabka kulanka] Muxaadarooyinka / aqoon isweydaarsiyada (iyadoo la adeegsanayo shirar)
Bedka: 362 mitir murabac
qolalka oo dhan
Maalin kasta oo keliya ayaa la isticmaalaa 28,000 / 28,000
Loo kala qaaday labo (A / B)
Waxaa loo qeybiyay XNUMX (XNUMX)
Maalin kasta oo keliya ayaa la isticmaalaa 33,600 / 33,600
Qolka carwada (kulanka) Liiska khidmadaha isticmaalka qalabka / gawaarida
Qolka carwada (carwada) Liiska khidmadaha isticmaalka qalabka / gawaarida